Akhri AFAR qodob oo ka khaldan tillaabo ay shalay qaadday DF Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Akhri AFAR qodob oo ka khaldan tillaabo ay shalay qaadday DF Somalia
Akhri AFAR qodob oo ka khaldan tillaabo ay shalay qaadday DF Somalia
(Muqdisho) 14 Okt 2020 – Waxaa shalay la sheegay in dhagxaan laga qaaday jidad ka tirsan magaalada Muqdisho, kuwaasoo horay loogu dhigay in lagu xakameeyo qaraxyada, kuwaasoo ay wax badan ka tareen, waloow ay shacabku ku dhib muteen waddooyinka xiran.
Haddaba, qaadista dhagxaanta ma ahane waxaa dareenka dad badan soo duwey oo ay qaar badan oo arrimaha amaanka yaqaanaana ka dayriyeen in munaasabad loo qabto dhagax qaadista, iyadoo ujeedku yahay in isla Xukuumaddii dhagxaanta dhigtay ay olole siyaasadeed ku gasho qaadistooda.
Haddaba, waxaannu haynaa ilaa dhowr qodob oo muujinaya sida aanay sax u ahayn ama ay khalad wayn u tahay qaabka arrintan loo wajahey oo dhalaysa natiijo caksi ku ah midda laga raadinayo.
1 – Dhibkii loo dhigay xal looma helin oo qaraxyadii weli ma dhamaanin, lagama adkaanin lalamana heshiinin kuwii umadda masaakiinta ah ku leeynayey.
2 – Amaan siyaasadaysani wuxuu keenayaa halis ka badan midda uu xallinayo, waa arrin ay dadka waxgaradka ihi aad uga digaan in amaanka la siyaasadeeyo, waayo marka la ogolaado taa waxaa dhacaya jilliinno badan oo halis ah oo ay xitaa ku jiri karaan in qaraxa laftiisa uu adeegsado dhinicii la dagaallami lahaa si hadaf siyaasadeed loo gaaro. Taas darteed, ayaysan sax u ahayn in madaxda Sirdoonka iyo Amaanku ay siyaasadda saamayn ku yeeshaan, waloow ay Somalia ay hadda halistaasi ka jirto.
3 – Waxaa khalad wayn ah in olole siyaasadeed laga dhigto dhibaato shacab oo aan si saaxi ah wax looga qabanin, iyadoo shacabkii halista loo loogey taageero looga raadinayo kabaabyo KMG ah, maadaama aanay jirin wax qaraxii ka celinaya qaar badanina aysan garanin ”laba daran mid dooro.”
4 – Waloow jidadka qaar dhagxaan laga qaaday, misna lama wada furin jidadkii magaalada oo marka laga soo tago jid caddayaasha oo weli xiran misna waxaa dhagxaan hor leh lagu jaray jidad kale oo magaalada ku yaalla, sida uu warku nagu soo gaarayo.
Markii afartan qodob la eego waxaa kuusoo baxaysa in la qaaday tillaabo muujinaysa mas’uuliyad darro iyo talo xumo xaajo aan la karinin umaddii lala hor yimid.
Previous articleTOOS u daawo: Germany vs Switzerland, Ukraine vs Spain – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleHay’adda Nabad Sugidda oo sheegtay inay qabatay maaddo halis ah oo u socotey kooxda Al Shabaab